Ngokusho kocwaningo olusha lwabaphenyi e-UT Health San Antonio nasezikhungweni ezisebenzisana nalo, abantu abaneminyaka ephakathi nendawo abanezimpawu zokucindezeleka baphatha amaprotheni abizwa nge-APOE. Ukuguquka kwezakhi zofuzo ku-epsilon 4 Kwangathi kungenzeka kakhulu ukuthi kuveze i-tau buildup ezindaweni zobuchopho ezilawula i-moo ...
UJennifer Mihas wayevame ukuphila impilo esebenzayo, edlala ithenisi futhi ehambahamba eSeattle. Kepha ngoMashi 2020, wahlolelwa ukuthi une-COVID-19 futhi wagula kusukela lapho. Ngalesi sikhathi wayesekhathele ukuhamba amakhulukhulu wamagceke, futhi wayephefumulelwe ukuphefumula ...
Ngabe ushokoledi uyakwenza ukhuluphale? Kubonakala kungangabazeki ngakho. Njengophawu loshukela ophakeme, amafutha, namakhalori, ushokoledi uwodwa uzwakala njengokwanele ukwenza umdayisi abaleke. Kepha manje abacwaningi baseHarvard University bathole ukuthi ukudla ushokoledi ngesikhathi esifanele ...